को थिए खुमबहादुर खड्का ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
को थिए खुमबहादुर खड्का ?
काठमाडौं– निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्दै लामो इतिहास बनाएका खुमबहादुर खड्का बहुदल आएपछि पार्टी पङ्तीमा असाध्यै मित्रवत प्रकृतिका लोकप्रिय नेता थिए। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालासँगै खड्काले भारतमा निर्वासन जीवन विताएका थिए।
२०३३ सालमा वीपी कोइरालासँगै मेलमिलाप नीति लिएर उनी स्वदेश फर्केपछि लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका थिए। प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछिका तीन वटै संसदीय चुनावमा उनी दाङबाट विजयी भएका थिए। उनले १२ औं पटकसम्म विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
सँधैजसो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का सत्ता राजनीतिमा निकै माहिर खेलाडी मानिन्थे। नेपाली कांग्रेसको १२ औ महाधिवेशनमा तेस्रो अधिक मत ल्याएर केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए। उनी लगातार केन्द्रीय समितिमा थिए।
राम्रो मन्त्रालय हात नपारेपछि २०५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला खेमालाई छाडेर खड्का देउवा समूहमा लागेर पार्टी फुटाएर महामन्त्री पनि बनेका थिए। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षको भेला गराउन खड्का सक्रिय थिए र सोही भेलाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी गठन गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति थिए।
२०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजना लगायतमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल चलान गरेपछि खड्काले महामन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो। अख्तियारले मागेको तीन करोड धरौटी २०५९ पौष १९ मा बुझाएर धरौटीमा रिहा भएपछि उनी आक्रामक रुपमा राजनीतिमा उदाएका थिए।
त्यसवेला उनको रिहाईका लागि जमानत रकम राखिदिनेको घुँइचो देखिएको थियो। २०४८ को मन्त्रिपरिषदमा भौतिक योजना र यातायात मन्त्री बनेपछि विभिन्न समयमा उनले स्थानीय विकास, गृह, वन तथा भूसंरक्षण, जलस्रोत जस्ता अधिक स्रोत परिचालन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी बारम्बार सम्हालेका थिए । भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले पाँच पटक सम्हालेका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्धामा अदालतबाटै सजाय पाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने ढोका बन्द भएपनि खड्का पार्टी राजनीतिमा सक्रिय र प्रभावशाली थिए।
पछिल्लो समय उनी हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाइरहेका थिए।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ १९:३६ शुक्रबार
को थिए खुमबहादुर खड्का